N'ime afọ nke ndị ahịa ịntanetị enweghị ike ileghara anya | Martech Zone
Na Oge nke ndị ahịa ịntanetị enweghị ike ileghara anya
Tọzdee, Febụwarị 4, 2010 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Bọọlụ Lorraine
Afọ iri abụọ na ise gara aga, ụlọ ọrụ ndị na-emezughị ibi ndụ dị ka ndị ahịa na-atụ anya ga-enwetakarị akwụkwọ iwe sitere n'aka ndị ahịa. Ngalaba na-ahụ maka ndị ahịa ha nwere ike ileghara akwụkwọ ozi ahụ anya, nke ahụ ga-abụ njedebe nke akụkọ ahụ.
Onye ahịa ahụ nwere ike ịgwa ndị enyi ole na ole. Maka ọtụtụ akụkụ, nnukwu ụlọ ọrụ dịka ụgbọ elu nwere ike ịpụ na ịbute ọrụ dara ogbenye. Dị ka ndị na-azụ ahịa, anyị enweghị obere ikike ijide ha.
Mana ọbịbịa nke netwọkụ mmekọrịta, bọọdụ mkparịta ụka, Twitter na Youtube, tebụl agbanweela. Vidio dị n'okpuru bụ otu n'ime ihe atụ kachasị amasị m nke onye na-azụ ahịa na-egosipụta ike ya. United Airlines mebiri ụbọ akwara bụ Dave Carroll. Mgbe ọnwa itoolu nke ịchọ nkwụghachi ụgwọ, ọ kwụsịrị. O dere abụ ma mepụta vidiyo nke elere anya karịa 73 nde ugboro. Site na ntinye 41,000 na nkọwa 25,000 o nweela ike iru karịa ndị enyi ole na ole, na-egosi ngbanwe nke ikike nke onye na-azụ ahịa.
Nke a bụ ihe mkparịta ụka ọha na eze maka ụgbọ elu, na-enweghị ụzọ isi kwụsị ya. Na mgbakwunye na vidiyo ahụ, achọtara m ihe karịrị ndebanye ederede 70,000 na njikọ dị na blọọgụ na saịtị akụkọ gụnyere Huffington Post na NY Times,
'Gini ka United Airlines kwesiri ime? Kedu otu nnukwu ụlọ ọrụ si eji mgbasa ozi mmekọrịta iji zaghachi? Ozugbo vidiyo ahụ wepụtara $ 1,200 nke gaara eme ka nsogbu ahụ la ọnwa isii gara aga, bụ ezughị. Dị ka Maazị Carroll na-akọwa: Emeela m iwe iwe oge ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, m kwesịrị ịkele United. Ha enyela m ụzọ m ga - esi mepụta ndị mmadụ si gburugburu ụwa.
Site n'ụzọ, ọ bụ naanị ihe ịga nke ọma dị ka onye na-egwu egwu, egwu ahụ emewo ka Mr. Carroll bụrụ ọganiihu nke abalị, yana ọrụ na-enye obi ụtọ na-agwa ndị otu okwu banyere ọrụ ndị ahịa.
Tags: dave carrollelekọta mmadụ mediaotuUnited ụgbọ elujikọrọ ọnụ gita
Kedu ihe kpatara Google Doe $ n't Care
Ihe dị mfe bụ isi ihe na-eme ka ndụ na-aga nke ọma